Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Tantara Jean-Philippe Mateta Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Izahay dia manolotra tantara feno momba an'i Jean-Philippe Mateta Zaza Mitaiza, Zava-misy momba ny Biografia, Fiainana voalohany, Fitiavana (sipa / vady) Zava-misy, fianakaviana, ray aman-dreny, fiainana manokana ary fiainana. Fakafakao feno daholo ny zava-niseho rehetra nanomboka tamin'ny fahazazany ka hatramin'izao naha-malaza azy.
Ny fiainana voalohany sy ny fitsanganan'i Jean-Philippe Mateta. - Lyonmag, TransferMarket sy Instagram
Eny, ianao ary fantatro fa Mateta dia zazakely vaovao eo amin'ny rindrina, iray izay ny mombamomba ny filalaovana baolina dia tsy voarakitra an-tsoratra. Ny tena izy koa dia iray amin'ireo tanora mpiady manaitra indrindra any Eropa, izay nanampy tanjona ho an'ny Wizardry izy.
Na izany aza, vitsy ny mpankafy baolina kitra no mihevitra ny hamaky Biography Jean Philippe Mateta, izay nomaninay, ary tena mahaliana. Ankehitriny raha tsy misy tohiny intsony, andao hanomboka amin'ny tantaran'ny fahatanorany.
Tantara Jean-Philippe Mateta Ankizy:
Jean-Philippe Mateta dia teraka tamin'ny andro faha-28 jona 1997 tany Clamart, kaominina kely iray izay hita any amin'ny tanàna atsimo andrefan'ny Paris, France. Ny mpilalao baolina kitra dia teraka tamin'ny taona voalohany ho an'ny ray aman-dreniny ary tamin'ny fianakaviana iray izay samy niteraka lahy sy vavy.
Raha nametraka izany i France-Football dia nitombo ilay nandroso ho zaza tony izay tia mametraka tarehy mitsiky. Fantatrao ve?…. Jean-Philippe Mateta dia mety ho teraka tao anaty fianakaviana manankarena raha tsy nandeha tsara tamin'ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra teo aloha. Holazainay aminao ny zava-mampalahelo izay nanjo ny rainy taona taona talohan'ny nahaterahany.
Fianakaviana sy olon'ny ray aman-drenin'i Jean-Philippe Mateta (Dadany):
Ny kintana teratany frantsay dia manana ny razamben'ny fianakavian'i Kongo, izay azo zahana amin'ny dadany ary angamba, ny reniny. Ny rain'i Jean- Philippe Mateta dia mpilalao baolina kitra nilalao amina matihanina tany Congo. Teo amin'ny faha-22 taonany, ny asany tamin'ny baolina kitra dia nahatonga azy handao ny fianakaviany ho any Belzika.
Ankehitriny tonga ny ampahany mampalahelo. Nahatonga fahasalamana lehibe tany Eropa ny toe-javatra satria ny raim-pianakaviana tsy faly dia nahita ny tenany nifanenjehany tamin'ny ratra Thigh, ary namarana tampoka ny asany tamin'ny fahazazany.
Jean-Philippe Mateta Fiharam-pianakaviana tamin'ny fotoana nahaterahany:
Ny mpitokona frantsay mitombo dia miakatra avy amin'ny fiavian'ny fianankaviana ambany antonony. Ny maraina, ny ray aman-drenin'i Jean-Philippe Mateta dia nanao asa tanana mba hampandehanana ny ankohonany. Ny dadany, izay namarana ny asany tamin'ny faha-22 taonany, dia nanao asa fiarovana tany Clamart.
Ny komity frantsay (Clamart) izay nipetraka ny ray aman-drenin'i Jean-Philippe Mateta, dia malaza ho mpifanolo-bodirindrina amin'ireo mpifindra monina izay te hipetraka eo noho ny maha akaiky azy any Paris (fiara 31 minitra).
Niorina tao Clamart ny ray aman-dreny Jean-Philippe Mateta izay lalana 31 minitra mankany Paris- Google Maps
Toa an'i Mateta, ny ankamaroan'ny mpilalao baolina kitra an'ny fianakaviana afrikanina dia ny fototra Dan-Axel Zagadou, Allan Saint-Maximin, Sebastien Haller rehetra dia nandany ny taona fahatanorany nitombo tao amin'ny tanàna frantsay mitovy any Paris.
Jean-Philippe Mateta Fiainana Tany am-boalohany - Ny ady ifanaovan'ny fampianarana sy ny baolina kitra:
Ho an'ny dadany, rehefa nahavita nanao anarana ho azy teo amin'ny lalao dia nahatonga azy hahita ny baolina kitra ho fanatanjahantena tsy malala ary mandrara. Mampalahelo fa nanjary noterena ireo olona ao amin'ny ankohonana io finoana io. Tany am-piandohana, ilay dadabe mafy fo dia nanantitrantitra ny zanany lahy Jean-Philippe fa tsy tokony hampandefitra ny fianarany amin'ny baolina rehetra izy fa amin'ny baolina kitra. Niresaka momba izany, nilaza tamin'ny France-Football indray ny mpikapoka.
“Fony aho mbola kely dia tsy tian'ny raiko hikasika baolina amin'ny baolina kitra aho. Iriko foana ny ho mpilalao baolina matihanina, ary tsy ny ahy ny sekoly. ”
Fantatrao ve?… Amin'ireo ray aman-drenin'i Jean-Philippe Mateta dia ny reniny no nijery hafa fijery. Nino ny fanirian'ny zanany lahy izy hanohy ny hiaina ny nofinofin'ny baolina kitra an'ny fianakaviana. Soa ihany fa nisy fotoana nandao ny fanabeazana.
Ahoana ny fomba nandresen'i Football ny fanabeazana:
Ny taona fahazazak'i Mateta dia nanasarika ny andro iray tamin'ny andro tena mampivarahontsana. Andro niaingany nandresy ny filan'ny dadany izany, ka nanerena tamin'ny alàlan'ny tanjony. Omen'ny kaonty ny tantara, hoy ny mpilalao baolina France-Football. Amin'ny teniny:
“Indray andro dia namonjy baolina ny namako ary nanapa-kevitra ny hiaraka amin'izy ireo aho. Nandritra ny filalaovana aho dia nanao dribb be be aho. Avy eo dia tonga ny mpanazatra ny ekipa ary nilaza tamiko…
'Tsy maintsy ho tonga ianao ary hisoratra anarana!' Namaly aho fa tsy mila izany ny dadako. Nomeko isa ny reniko. Niantso izy, nanazava tamin'ny ray aman-dreniko fa mety misy hery. Tena mahagaga, nanaiky ny raiko tamin'ny farany. ”
Ilay tanora dia nanomboka ny diany filalaovana baolina kitra tamin'ny klioban'ny mpiara-monina amin'i Olympique de Sevran. Nifindra tany Sevran FC izy avy eo, izay 33.3 km miala amin'ny tranon'ny fianakaviany mba hahazoana traikefa tanora.
Jean-Philippe Mateta Biography- Ny làlana mankany amin'ny tantara malaza:
Ny fisian'ny génom-pianakaviana iray, izay nahatonga an'i Mateta hitombo toa ny Giant, dia nankasitraka azy avy hatrany tamin'ny fahazazany. Noho ny fahaverezany, dia nilalao teo hatrany hatrany ireo mpifanandrina tamin'ny tovolahy taloha.
Tany am-piandohana, ny dadany dia nampianatra azy ny fomba handraisany andraikitra ary hitantana ny tsindry mandritra ny fifaninanana amin'ny mpilalao taloha. Na dia niezaka nanapaka azy aza ireo mpilalao malaza kokoa, dia nanohitra i Mateta fa tsy nahitana tahotra mihitsy.
Mialà ny zava-dratsy rehetra nanjo azy, dia natolotry ny Mateta ho an'i (JA Drancy) ny Akademia fantatra fa nahavita voninahitra maro tamin'ny baolina kitra frantsay. Taorian'ny nanasongadinana azy dia nanaiky ny fifanarahana tanora amin'ny klioban'ny fizarana avo kokoa (LB Châteauroux) ilay tanora.
Ny hafalian'ny ray aman-dreniny (indrindra fa ny dadany) sy ny fianakaviany dia tsy nahalala fa voafetra tamin'ny fotoana nahazoany diplaoma tamin'ny baolina kitra tanora (ny taona 2016). Tsy nijanona teo ny fahombiazana. Nanomboka ny dian'ny karana zokinjokiny ilay tanora ary nahatratra tanjona 20 tamin'ny vanim-potoana iray.
Jean-Philippe Mateta Mitsangàna amin'ny tantaram-piainana malaza amin'ny tantara:
Raha jerena ny tanjony dia niharam-panahy ny goavambe baolina kitra frantsay (Lyon), ka nanapa-kevitra ny hanao sonia ilay tanora. Nandritra ny klioba frantsay, Mateta dia nanohy ny làlana mivezivezy rehefa nahatratra tanjona 22 indray ny karana ho an'i Lyon sy Le Havre (amin'ny alàlan'ny trosa).
Niverina avy amin'ny trosa tamin'ny volana jona 2018, ny kintana miakatra dia nandray ny fanapahan-kevitra lehibe indrindra tamin'ny asany - Mandeha any ivelany. Na dia ny fialan'ny Lacazette avy tamin'ny Lyon mety ho nanampy. Na izany aza, ny fahatongavan'i Mariano Díaz, ny fisian i Memphis Deplay ary Nabil Fekir dia fifaninanana bebe kokoa amin'ny fanafihana toerana.
Tamin'ny fotoana nametrahana ny tantaram-piainan'i Jean-Philippe Mateta, dia mankafy fiainana mamy miaraka amin'ny klioban'ny Bundesliga Mainz 05 ny mpilalao mavokely tanjona. ny fanaovana sonia lafo vidy indrindra.
toy ny Jonathan David, Mateta manana tanjona betsaka amin'ny fahazazany. Ny mahaliana kokoa dia ny nahatonga ny mpankafy mieritreritra fa izy no manaraka Romelu Lukaku amin'ny fanamboarana.
Tsy isalasalana fa ireo mpankafy sy mpankafy baolina kitra amin'ny FIFA dia efa mahita an-keriny hafa mandroso amin'ny talenta sokajy eran'izao tontolo izao. Jean-Philippe Mateta dia tsy isalasalana fa lehilahy niambina teo amin'ireo andian-doka famokarana tsy voafetra frantsay. Ny ambiny, araka ny nambarany, dia tantara ankehitriny.
Jean-Philippe Mateta Fitiavana Fitiavana- Zoky sipa, zanaka vady?
Nandritra ny fiainana lehibe tany Alemana dia nitady ny fahazoan-dàlana nataon'ny ray aman-dreniny ilay mpikambanina 6 tongotra 2 santimetatra. Ny antony nahatonga izany dia satria nahatsapa fa matotra izy ary mila manomboka fianakaviana iray. Zava-dehibe indrindra ny fananana vady.
Talohan'ny nahitana ny areti-mifindra COVID-19 dia nifandray tamin'ny sakaizany ilay zazalahy tiana. Sary eto ambany, ny sakaizan'i Jean-Philippe Mateta dia olona tsy tia tena izay tsy manao afa-tsy ny fanohanana ara-pihetseham-po amin'ny lehilahy azy na izany aza dia midika hoe mitazona ny fiainany manokana.
Hihaona amin'ny sakaizan'i Jean-Philippe Mateta sy ny vadiny. - Instagram
Rehefa mitsara amin'ny fomba alehany dia azo atao ny manambady ny dingana manaraka. Ambonin'izany, fotoana iray monja alohan'ny hahatongavany ho ray aman-dreny amin'ny zanaka tsara tarehy.
Fiainan'i Jean-Philippe Mateta manokana:
Ao amin'ny fizarana teo aloha dia nanapoaka anao be izahay momba ny tantaram-piainan'i Mateta tamin'ny fahazazany, ny tantaram-piainany ary ny fiainam-pianakaviana. Ankehitriny dia misy fizarana iray izay hahatonga anao hanontany ny fanontaniana:
Iza i Mateta?… .. Inona ny toetrany eny ambony eny?…
Fantatrao ny mpilalao baolina kitra an'ny tena manokana -IG
Ho an'ny mpamaky fanontaniana, ny fahazoana valiny amin'ireo fanontaniana etsy ambony sy ny fahitana ny sary etsy ambony dia tena hanampy anao hahazo sary feno amin'ny fiainany Mateta. Voalohany, izy dia alika lehibe.
Faharoa, momba ny fiainany manokana, Mateta dia olona manana fironana moka sy manala baraka. Indraindray dia manandrana miverina indray izy amin'ny fotoana mandany fotoana irery. Amin'ny fotoana hafa, tena mety velona ihany ilay mpanafika. Raha fintinina, Mateta dia manana toetran'ny ambivert. Ilay teny dia midika hoe olona manana toetra voatezintina sy manala baraka.
Ny herin'ny herinaratra dia mahazo karama 19,000 isan-kerinandro ary karama € 989,900 isan-taona. Raha manontany tena ianao hoe ahoana ny handaniany ny volany, dia voaarononay ianao.
Misy ny miteny hoe 'ho mahantra foana ianao raha mandany vola betsaka noho ny volanao.' Mateta antsika manokana dia miaina fiainana ambany sy mahavariana. Ao anatin'ny fikatsahana hankafy ny tenany, aleony ny Espanola any Tenerife izay ilainy amin'ny Dolphins, mihinana mofomamy ary hankafy ny natiora.
Fantatrao ny fiainana manokana an'ny mpilalao baolina kitra
Jean-Philippe Mateta fiara:
Peharbs, tsy fantatrao mihitsy fa ny tetibolam-panjakanao no mitaky ny ampahany betsaka amin'ny harenany mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fiara. Raha jerena eto ambany dia tsy menatra i Mateta haneho ny fiarany marefo amin'ny mpankafy.
Jean-Philippe Mateta Car- Lehibe izy ary tena mpankafy fiara Big- Picuki
Mifindra amin'ny fiarakodia, i Jean kosa dia tia mankafy, amin'ny fomba tsy misy palitao, ny bisikileta mitondra kodiarana roa. Tsy isalasalana fa misy lafiny roa amin'ny fiainany manokana sy ny fomba fiainany.
Ilay striker dia tia mandany ny volany mividy basim-bidy kely
Fiainana Jean-Philippe Mateta Fianakaviana:
Hatramin'ny fahazazany dia ny zavatra lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny Mateta dia ny fitiavana ny olona ao amin'ny fianakaviana. Raha jerena eto ambany dia tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny fotoana nahaterahan'izy ireo mankalaza ny mofom-pianakaviana.
Fotoam-pahaterahana dia fotoana falifaly ho an'ny fianakaviana- IG
Momba ny ray aman-drenin'i Jean-Philipe Mateta:
Misaotra daholo nitaiza zanaka nateraka, ny reny toala ary ny dadan'ireo mpilalao baolina kitra frantsay dia samy voahaja tsara eo anivon'ny vondrom-piarahamonina mainty frantsay Clamart. Raha jerena amin'ilay sary etsy ambony dia toa ny ray aman-dreny Mateta dia nanao ezaka mba hanafina ny tenany amin'ny vahoaka.
Momba ny Rahalahin'i Jean-Philipe Mateta:
Raha ny fitantarantsika azy dia manana mpirahalahy sy mpirahavavy iray izay tena tiany izy ity. Ny fanoloran-tena nataon'i Jean-Philippe hikarakara ireo mpiray tam-po aminy dia mitovy amin'ny fanolorantena apetrany ao anaty kianja. Amin'ny maha-fianakaviana, Mateta dia azo antoka fa maka ny taranja baolina kitra amin'ny rahavaviny ny rahavaviny ka izany no hisolo tena azy amin'ny maha-solontenany.
Hihaona amin'ny rahavavin'i Jean-Philippe Mateta izay misolo tena azy amin'ny maha-solontenany.- Instagram
Ny havan'i Jean-Philipe Mateta:
Raha mbola niasa izy, dia tsy ny ray aman-dreniny sy ny anabaviny fotsiny no nanohana azy ireo. Nanana havany koa i Mateta, izay tsy toy ny nenitoany mahafinaritra. Salama novakinao, azonao jerena ao amin'ny sary eto ambany ve izy?
Saripika mahafinaritra an'ny rahavavin'i Jean-Philippe Mateta, anabaviny ary nenibeny rehefa nifaly ho azy- Instagram
Ao amin'ny fizarana ny tantaran'ny fahazazantsika sy ny zava-misy momba ny tantaram-piainanay, ho hitanay amin'ity fizarana ity, tranga izay tsy mbola fantatrao fa nisy ny momba an'i Jean-Philippe Mateta.
Zava-misy # 1- Tsy manana fitiavana izy amin'ny Agnety Football:
Hatramin'ny andro voalohany amin'ny maha mpilalao baolina kitra azy, Mateta dia mpisolovava hatrany mba hisorohana ny zavatra heveriny fa 'Wastage. ' Ny striker dia mino fa ny Agenjan'ny baolina kitra dia mahazo vola be tsy amin'antony. Raha niresaka tamin'ny haino aman-jery frantsay izy dia nanambara izy hoe maninona izy no tsy mankasitraka ny fananana agent. Amin'ny teniny;
“Antsoina hoe be dia be no niantsoako ahy. Manana mpisolovava aho ary ampy ho ahy izany. Tsy mankasitraka ny fahazoan-dàlana aho. Indray mandeha dia nanana iray tamin'ny asako aho. Tsy liana aho izao.
Izy ireo dia milaza amiko izay efa fantatro sahady. "
Araka ny efa voalaza teo aloha, ny iray amin'ny fianakavian'i Jean-Philipe Mateta (ny rahavavin-janany) dia natokana ho an'ny adidy mpiandraikitra azy. Ny marina dia izy mihitsy no nanao ny fianarany mikasika an'io.
Fact # 2- Fivavahana:
Raha mbola tsy mino ianao, dia mety ho ny ray aman-drenin'i Jean Philipe Mateta no nanangana azy ho Silamo. Raha ny tsikaritray, manana porofon'ny sary momba izany izahay. Ny mpilalao baolina kitra dia aseho eto ambany taorian'ny nahavitan'ny vavaka nataony tao amin'ny Moske Sheikh Zayed tany Abu Dhabi, UAE.
Jean-Philippe Mateta Fivavahan-kevitra vao niverina avy any Heikh Zayed Grand Mosque any Abu Dhabi, UAE. Mety ho silamo-IG angamba izy
Misimisy kokoa momba ny Mateta Untold Facts:
Zava-misy # 3- Ilay filatsahany Football:
Tahaka ny mpilalao baolina kitra Swedish Alexander Isak, Mateta dia an'ireo tsy mahita Messi or C Ronaldo tahaka ny sampy. Noho ny haavony ambony dia mino izy fa afaka manana ny sampy tokana- Tsy hafa ankoatra izany Zlatan Ibrahimovic. Amin'ny teniny;
“Rehefa lehibe aho dia nitady mpikatroka lava be izay mihazakazaka haingana, izay manao fihetsika ara-teknika sy dribble. Inona no tiako tany Zlatan? ... Ny lafiny fanoratany izay mahatonga azy ho mpanaja tsara indrindra amin'ny tantara. Tsy misy adihevitra momba izany. ”
Zava-bita # 4- Fialam-bidy:
Tamin'ny volana jona 2018, nanisy fifanarahana tamin'ny FSV Mainz 05 i Mateta 19,000. Ity fifanekena mahavokatra ity dia nahazo karama 989,900 XNUMX isan-kerinandro ary karama € XNUMX. Manimba ny fidiram-bolany ho lasa bitika isika.
Vola amin'ny Pound Sterling (£)
Vola amin'ny vola dolara amerikana ($)
Per Year € 989,900 £ 863,534 $1,076,654
isam-bolana € 82,492 £ 71,961 $89,721
Isan-kerinandro € 19,000 £ 16,735 $21,883
Isan'andro € 2,714 £ 2,391 $3,126
Per Hour € 113 £ 99.6 $130
Isaky ny Minut € 1.88 £ 1.66 $2.17
Isaky ny segondra € 0.03 £ 0.02 $0.03
Miorina amin'ny Salary Stats etsy ambony Jean-Philippe Mateta efa nahazo anao nanomboka teo nanomboka nijery ity Pejy ity.
Peharbs, tsy mbola fantatrao akory. Ny lehilahy antonony izay mitana vola mitentina 1,610 isam-bolana dia mila miasa mandritra ny 4.2 taona farafahakeliny hahazoana $ 82,492, izay tamberin'ny mpiady ao anatin'ny 1 volana.
Misaotra mialoha hatreto ny famakiana ny tantaranay an'i Jean-Philipe. Raha mametraka izany atiny amin'ny Mateta izany ianao Tantara momba ny fahazazana, anisan'izany ny Zava-misy Biography, ny tonian-dahatsoratra dia niambina mba hisian'ny fahamarinana sy ny hitsiny.
Raha misy tranga, dia mahita zavatra tsy mitombina amin'ity lahatsoratra momba an'i Jean-Philipe ity ianao, azafady miezaka ny hametraka ny hevitrao na Mifandraisa aminay.
Farany, nanomana ny Jean-Philipe Mateta Wiki izahay, izay hanampy anao hahazo vaovao haingana sy fohy kokoa momba ilay mpikapoka.
Fampahalalana momba ny Wiki
Anarana feno: Jean-Philippe Mateta
anaram-bositra: Ny New Trezeguet
teraka: 28 Jona 1997 (taona 22)
Fianakaviana: Kongo sy Frantsa
ny Ray: Atoa Mateta (mpilalao baolina kitra Kongoley)
Mother: Andriamatoa Mateta
mpiray tam-po Rahavavy iray (solontenany)
hahavony: 1.92 m (6 ft 4 in)
Weight: 84 kilao
Adrien Rabiot tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa